ओली सरकार ! रेल पानीजहाजभन्दा पहिला यीनलाई पुल बनाईदिऊ ! «
ओली सरकार ! रेल पानीजहाजभन्दा पहिला यीनलाई पुल बनाईदिऊ !
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार १२:१५
काठमाडौ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल चलाउने भन्दा धेरैले ठट्टामा उडाए । तर, ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि रेल चलाउने कुरा भाषणमा होइन, योजनामै समेटिन थालेको छ । त्यसैगरी ओलीले तुईन बिस्थापित गर्ने योजना बनाए । तर त्यो जादुको छडि थिएन त्यति सजिलो थिएन । धेरै नदीमा झोलुङेपुल समेत छैनन् ।
अहिले त नेपाल आफैंले मात्र होइन छिमेकी देश भारत र चीनले समेत रेलमार्ग बनाउने भनेपछि धेरैलाई आफ्नै पालामा रेल चढ्न पाइएला त भन्ने कौतुहल बढेको छ । उत्तरको रेल काठमाडौंमा ल्याउने सम्झौता भएको २ वर्षपछि दक्षिणको रेल पनि काठमाडौं ल्याउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं दुई देशको रेलमार्गबाट जोडिने छ नै, अरु ठाउँमा पनि रेल कुद्नेछ ।
नेपालमा रेलमार्ग विस्तार गर्न दुई छिमेकीबिच प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा शनिवार रेललाइन विस्तारका विषयमा चारबुँदे सम्झौता भएको छ । भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्न सहमत भएको छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र रक्सौलसम्म अहिले पनि रेल चलिरहेको छ । रक्सौलदेखि वीरगंज हुँदै काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग भारतको लगानीमा बनाउने भनिएको छ । त्यसका लागि एक वर्षभित्र नेपाल सरकारको सहयोगमा सर्भेक्षण सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।
रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय नेपाल र भारत सरकारबीच भएको यो सहमति निकै सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले वीरगंज काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
तर विगतमा भारतसँग भएका विभिन्न आयोजना अझै अलमलमै रहेकाले विद्युतीय रेल विस्तार पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने विज्ञहरुको बुझाई छ । त्यस्तै चीनले पनि केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्नेगरी योजना अगाडि सारेको छ । यसअघि २०७२ चैतमा भएको ओलीको चीन भ्रमणमा केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो रेलमार्ग काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म जोड्ने चीनको योजना छ ।
रक्सौलदेखि वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौंकेरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंकाठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीभारतसँग नाका जोडिएका मुख्य शहर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग रक्सौलदेखि वीरगंज हुँदै काठमाडौं रेल कुद्न झण्डै ६ बर्ष लाग्ने अनुमान रेल विभागको छ । संम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयारका लागि १ बर्ष लाग्ने रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पूर्वतयारीमा १ बर्ष र निर्माण काम धमाधम हुने हो भने ५ वर्ष गरी ६ वर्षमा रक्सौलबाट काठमाडौं रेल आउने वातावरण बन्नेछ । भारतले जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेलमार्ग बनाइरहेको छ ।
जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको झण्डै ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डमा आउँदो कात्तिकसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम सकिने र माघसम्म सञ्चालनमै ल्याउने योजना रहेको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो । यस्तै, भारतको जल्पाइगुडीबाट काँकडभिट्टा, जोगबनी विराटनगर, नौतनहवाबाट भैरहवा र भारतको रुपेडियाबाट नेपालगञ्ज पनि रेलमार्गले जोडिनेछन् ।
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन वर्षमै मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सहित काम थालेको छ । मेट्रो रेलबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० मा सम्झौता गरिने र त्यसैको आधारमा अबको तीन वर्षमा मेट्रोरेल चलाउने गरी काम थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।